Novena kuna Mwari Baba
Mwari Baba vangu vokudenga, ndinokupfugamirai uye handisi chinhu pamberi poUkuru hwenyu. Imi moga ndimi Iye Chokwadi, Upenyu noUnaku. Kunyangwe zvazvo ndiri munhu nhando asingakodzeri, ini ndinokutunhidzai, ndinokurumbidzai, ndinokutendai, ndinokudai muri pamwe noMwanakomana wenyu Muponesi nomukoma wedu Jesu Kristu, nomumwoyo wake wetsitsi nomutsa uye nomukodzero yake isina mugumo.
Ndinodisa kwazvo kukuitirai, kukufadzai, kukuteererai nokukudai nguva dzose muri pamwe naMaria mhandara isine mhaka, Amai vaMwari naAmai vedu. Nokuda kwerudo rwangu kwamuri, ndinoda kuva norudo uye kuitirawo mumwe wangu.
Baba vokudenga, ndinokutendai nokuti makandiita mwana wenyu neruombeko. Zvino nechivimbo chomwana, ndinokumbirawo izvi...
(Kumbira chaunoda) ...
Ndinokumbira kuti kuda kwenyu kuitwe. Ndipei zvamunoziva kuti zvakanakira mweya wangu uye mweya yavose vandinonamatira. Tumai Mweya Mutsvene wenyu kuti andivhenekere nokunditungamirira munzira dzomutemo wenyu noutsvene, ndivavarire mufaro wekudenga uko kwandinotarisira kuzokupai mbiri kwemisi isingaperi.
Novena yeZuva rokuberekwa kwaKristu
Novena kuna Jesu Mucheche wokuPrague
Novena kuMwoyo Mutsvene waJesu
Novena kuMwoyo weTsitsi waJesu
Novena yekuzvipira kuTsitsi dzaMwari
Novena kuMweya Mutsvene
Novena kuMweya wakasikwa usine mhaka weMhandara Maria
Novena kuna Amai voRubatsiro Rusingagumi
Novena kuna Amai vedu vekuFatima
Mhandara tsvene kwazvo, makafadzwa nokushanyira Fatima mukaratidza vana vafudzi, upfumi hwenyasha hwakavigwa mumunamato weRusariro. Ndinokutetererai kuti muise mumwoyo mangu, moto wechido chokunamata rusariro. kuti nomukurangarira zvakaratidzwa zvokununurwa zviri murusariro, ndiwanewo nyasha netsika dzakanaka dzandiri kukumbira..
Ndinokumbira izvi nokuda kwaJesu Kristu Tenzi noMudzikinuri wedu.
Novena kuna Amai mubatsiri waVakristu
Maria Mutsvene kwazvo ndinokukwazisai seHosi yangu ndichikutendai pamusana pamakomborero asingaverengeki amunodururira vose vanopotera nokwamuri vachida kubatsirwa nemi.
Maria mhandara ine simba, mune ukuru uye mbiri somudziviriri weSangano. Muri rubatsiro rwunofadza nokuyemurwa rwaVaKristu. Munotipa simba semauto ehondo ari kunorwisa. Makaparadza manyepo panyika. Mukati mokurwadziwa, kutambudzika nokushungurudzwa, ndidzivirireiwo kumasimba omuvengi, panguva pokufa, muzogamuchirawo mweya wangu kudenga.
Novena kuna Amai vedu veGomo Bandra
Novena kuna Amai vedu veMenduru yezvishamiso
Novena kuna Amai vedu vekuVailankanni
Novena kuna Anna Mutsvene
(Murevereri wavana Amai)
Anna Mutsvene mune mbiri, ndinoda kukuremekedzai nokuzvipira kwangu kwamuri. Ndinokusarudzai makatevedzana neMhandara Tsvene saamai nomudziviriri womweya wangu. Ndinokupai muviri wangu nomweya wangu nazvose zvandinodisa zvapamweya nezvapanyama uye zvose zvemhuri yangu.
Anna Mutsvene makanaka, ndizere norudo kuna avo vanokumkukumbirai uye nyasha naavo vari kutaambudzika, ndinosuma munamato wangu uyu kwamuri ndiine chivimbo.
Ndinokumbira kuti mundisvitsirewo chichemo changu kune mwanasikana wenyu Maria mhandara tsvene, kuti muri pamwe mugochisvitsa kunaJesu. Nomuminamato yenyu, daiwaro chichemo changu chanzwikwa. Asi kana zvandinokumbira zvisiri maererano nekuda kwaMwari, ndiwanireiwo nyasha dzinobatsira mweya wangu.
Mushure mokukudai nokukurumbidzai pano pasi semwana wenyu akazvipira muchokwadi, itai kuti nomuminamato yenyu, ndizova nomufaro wokukudai nokukurumbidzai kudenga pamwe namatumwa navatsvene, kwemisi isingaperi.
Anna Mutsvene makanaka, Amai vaMaria upenyu hwedu, kunaka nokutarisira kwedu, ndirevererei kwaari mundiwanirewo zvandinokumbira.
Novena kuna Josefi Mutsvene
(Mudziviriri nomurevereri weSangano Katorike)
Josefi Mutsvene, muri mudziviriri nomurevereri akavimbika wavose vanokurememkedzai. Ndinovimba nemi. Mune hukamahune simba naMwari uye hamukanganwi kana kurasa varanda venyu vakatendeka.
Ndinozvirereka ndichizvipa kwamuri pamwe navadikanwi vangu vose, kuti mutirevererewo. pamusana perudo rwenyu kuna Jesu naMaria, regai kutirasa asi ivai nesu muupenyu huno, mugozotibatsira panguva yokufa.
Josefi Mutsvene mune mbiri, muteveri waJesu akatendeka, ndinosimudza mwoyo wangu kwamuri, ndichikutetererai kuti mundiisirewo reverero yenyu ine simba kuna Jesu. Mundiwanirewo nyasha dzandinoda dzepamweya nepanyama, zvikurusei rufu rwakanaka, uye izvi zvandinokumbira...
Muchengeti nomudziviriri waIzwi Akava munhu, ndinovimba kuti minamato yamunonditurira inogamuchirwa zvakanakisa pamberi pechigaro chushe hwaMwari.
Novena kuna John Vianney Mutsvene
Novena kuna Anthony Mutsvene
Novena kuna Jude Thaddeus Mutsvene
Novena kuna Rita Mutsvene
Rita Mutsvene, Mwari akakupai kwatiri somuenzaniso worudo nomwoyo murefu, akadazve kuti mugoverane, kutambudzika nokufa kweMwanakomana wake. Ndinotenda Mwari pamusana pamakomborero mazhinji aakudururiai muupenyu hwenyu hwose, zvikurusei kushaiwa mufaro mumuchato wenyu, uye urwere hwenyu muri kuvapikiri.
Daiwaro muenzaniso wenyu wandikurudzirawo kutakura muchinjikwa wangu nomwoyo murefu uye kugara upenyu hutsvene. Dai ndagona kufadzawo Mwari nechitendero namabasa kuburikidza nokumuitira sezvamakaita imi.
Ndinokundikana nokuda kwoutera hwangu. Ndireverereiwo kuna Mwari kuti andidzorere murudo rwake kuburikidza nenyasha dzake agonondibatsira munzira yangu yoruponeso.
Norudo nemutsa wenyu, inzwaiwo munamato wangumundireverere kuna Mwari ndiwanewo izvi zvandinokumbira ....
Daiwaro minamato yenyu yandibatsira kurarama upenyu hwakatendeka kudaidzo yangu sezvamakaita nokupa rudo rwakadzama kuna Mwari nomumwe wangu kudzamara ndasvika kuupenyu husingaperi kudenga.
Novena kuna Peregrine
(murevereri wevanorwara negomarara)
Peregrine Mutsvene, Sangano Amai Vatsvene rakakudomai somurevereri wavose vanorwara namaronda uye gomarara. Ndinopoterawo nokwamuri ndiine chivimbo chekuti mudnibatsirewo pane izvi...
Kuti ndichinge ndazorasa chivimbo, ndinokuteterai kuti mundireverere nomutsa wenyu. Ndikumbirirei kuna Maria amai vamarwadzo vamaida chaizvo uye vamakazvibatanidza navo murudo panguva yamairwadziwa negomarara, kuti agondibatsirarwo neminamato yake ine simba uye nyaradzo.
Ndipeiwo simba rokugamuchira miedzo yangu kubva muruoko rwerudo rwaMwari ndiine mwoyo murefu wokuzvipa kwaari. Kutambudzika kwangu ngakundisvitsewo kuupenyu huri nani hunondigonesa kuripira matadzo angu neepasi rose.
Peregrine Mutsvene, ndibatsireiwo mukutodzana nemi mukutakura muchinjikwa unobvumirwa naMwari kuti uuye pandiri. Ndino zvibatanidza pamwe naJesu akarovererwa uye naAmai vamarwadzo, kupira matambudziko angu kuna Mwari norudo rwose rwomwoyo wangu. Zvose kuitira mbiri yake uye ruponeso rwemweya yavanhu, zvikurusei mweya wangu.
Novena kuna Therese Mutsvene weMwana Jesu
Novena kuna Francis Xavier Mutsvene
Novena kuna Martha Mutsvene
Novena kuna Dympna Mutsvene
Novena kumurevereri Mutsvene wako/wedu
Novena kuna Gerard Mutsvene
Novena yaAmai veRubatsiro Rusingagumi
1. Novena kuna Mwari Baba
2. Novena yeZuva rokuberekwa kwaKristu
3. Novena kuna Jesu Mucheche wokuPrague
4. Novena kuMwoyo Mutsvene waJesu
5. Novena kuMwoyo weTsitsi waJesu
6. Novena yekuzvipira kuTsitsi dzaMwari
7. Novena kuMweya Mutsvene
8. Novena kuMweya wakasikwa usine mhaka weMhandara Maria
9. Novena kuna Amai voRubatsiro Rusingagumi
10. Novena kuna Amai vedu vekuFatima
11. Novena kuna Amai mubatsiri waVakristu
12. Novena kuna Amai vedu veGomo Bandra
13. Novena kuna Amai vedu veMenduru yezvishamiso
14. Novena kuna Amai vedu vekuVailankanni
15. Novena kuna Anna Mutsvene
16. Novena kuna Josefi Mutsvene
17. Novena kuna John Vianney Mutsvene
18. Novena kuna Anthony Mutsvene
19. Novena kuna Jude Thaddeus Mutsvene
20. Novena kuna Rita Mutsvene
21. Novena kuna Peregrine
22. Novena kuna Therese Mutsvene weMwana Jesu
23. Novena kuna Francis Xavier Mutsvene
24. Novena kuna Martha Mutsvene
25. Novena kuna Dympna Mutsvene
26. Novena kumurevereri Mutsvene wako/wedu
27. Novena kuna Gerard Mutsvene
28. Novena yaAmai veRubatsiro Rusingagumi
​For The Greater Glory of God
(Redirected to EWTN Website)